Zviratidzo | RayHaber
mushaRayHaber | Railway Highway Airline Highway Nhau uye AuctionsTag
Mupepeti mukuru / Chief Editor in Chief
Levent Elmastaş - mupepeti @rayhaber.com
Can Özen - anogona @rayhaber.com
Mutungamiri weMutemo / Jurisconsult
Av. View Alper Fırat's Full Profile
Mutungamiri Wezvemari / Mutevedzeri Wezvemari
Kubata uye Kudzivirira
Gore negore, mukuru-kumhanya njanji kwemauto, Turkey ndiye akaramba achikura kuva mutungamiri muEurope. Kushambadzira mumigwagwa, iyo inotora ichi chichibva kubva kumatokisi akareba, inoramba ichiwedzera. Mukuwedzera kune zvikwereti zvakagadzirwa muguta racho, vazhinji vekambani dzedu dzokugadzira dzimba dziri kupenya. Inofara kuti yakatanga kugadzirwa kweTurkey yakakurumidza ın national train ın pamwe chete nefamisi yepamba, rail light uye vatasvi vemotokari pasi. Isu tinofara zvikuru kuva mune iri tafura yekuzvikudza.
Isu tanga tichishanda ne7 kwemakore semutori venhau asingasarure. RayHaber Webhusaiti yedu yakave yenhau hombe inosvikira avhareji ye50 zviuru zvakasiyana zvevashanyi pazuva, iine 20 zviuru zvemashoko, ezuva nezuva mafororo emabhuru uye 30 yegore rejanji rekare. Vavariro yedu ndeyokuti kufamba zvedu zvezuva vashanyi 100 zviuru, nzvimbo zvinzvimbo mune National kupinda Turkey chokutanga chokufambisa nzvimbo.
Motokari yemotokari yeTurkey Nhanho yakakwirira. Makambani ekugadzira nzvimbo. Kuwedzerwa kumotokari dzemunharaunda, LRT uye motokari dzemigwagwa, dzinonzi "matarenda enyika". Tiri kufara kuti dzinokudzwa mumamiriro ezvinhu aya.
Isu tinoshandira kushambadzira uye pachena nhau dzekushambadzira ye7 makore. RayHaber peji rewebhu rine zvinopfuura 50.000 nhau, zuva nezuva zvinyoro nyowani uye 20 makore ejanji achiwana hofori portal iine 30.000 vashanyi vakasarudzika pazuva. Chinangwa chedu chitsva ndevashanyi ve100.000 pazuva uye vangave vari mumasayiti e1000 mune zvinyorwa zvepasi rese zvewebhu zvinyorwa.
nhau: webhu / mabhuku akabudiswa
umbwa: 01.12.2011 test / 01.01.2011 iripo
News: 60.000 nhau, 1700 video
vashanyi: 30.000 singular / day
RayHaber.com inovimbisa kuenderana nePrince Professional Nheyo uye kodzero dzese dzakachengetedzwa.
Peji redu renhau rakabudiswa zvinoenderana neMutemo Nha. 5846 paInternational uye Artistic Mabasa. Kunyororazve nekuparadzira nhau dzinogamuchirwa kubva kumasangano mune chero svikiro zvinoda mvumo yekunyorwa isati yatanga zvichienderana nemutemo wemasangano anoshanda. RayHaberzvimwe zvinyorwa uye zvinyorwa zvakabudiswa pa RayHaberinogona kubudiswa zvakare pamamiriro ezvinhu kuti chinongedzo chinopihwa kune inoenderana peji re .com. RayHaberVanyori vane mhosva yezvinyorwa uye zvakataurwa zvakabudiswa pa .com.
Yedu saiti haina zvematongerwo enyika uye inongozivisa vaverengi vayo nezve zviitiko nezviitiko zviri munhau izvo zvinoburitsa uye zvinoramba zvichizivisa. Iyo inoda kutsanangura uye kuiburitsa kuvaverengi vayo pasina kuita chero zviitiko. RayHaberThe anogutsikana Hamubvumirwi .com 100% inobudiswa maererano mitemo Republic kweTurkey, izvozvo rakabudiswa mhando dzose mifananidzo, mashoko, uye nhau kubva muridzi Copyright rworudyi acho rakabudiswa kuwana akanyorwa mvumo.
RayHaber.com yakagamuchira kuremekedza mutemo, mitemo, copyright uye kodzero dzemunhu. Yedu saiti inoshanda se 'zvemukati mupi' sekutsanangurwa kuri mumutemo 5651. Maererano nemutemo wakakodzera, maneja enzvimbo haamanikidzwa kudzora zvisiri pamutemo. Naizvozvo, yedu saiti yatora iyo 'yambiro uye kubvisa' nheyo. Masangano anomirira kodzero vane kusavimbika pamusoro pechokwadi chenhau uye vanonzwa sekunge mabasa ane kodzero akagovanwa zvisiri pamutemo uye kodzero dziri pamutemo dzinotyorwa nechero nhau, info @Rayhaber.com mail kero kana KUTI BUDA MUFANANIDZO. Gweta rako rinoongorora zvichemo zvako uye zvikumbiro uye zviri mukati izvo zvinofungidzirwa kuti zviri kukanganisa zvinobva zvabviswa pawebsite yedu ipapo.
© Copyright 2018 RayHaber.com Makopi emhando dzose dzezvakadai sedzakodhi, nhau, mifananidzo, kubvunzana RayHaber.com. RayHaberZvese zvinyorwa, zvishandiso, mifananidzo, mafaira ekuteerera, mifananidzo, mavhidhiyo, zvigadzirwa uye urongwa pane .com saiti yakachengetedzwa nemutemo wekopi 5846. izvi RayHaber.com inogona kunge isiri kukopwa, kugoverwa, kushandurwa, kushambadzirwa chero nenzira pasina mvumo yakanyorwa ye .com. Kutevedzera uye kushandisa hazvigone kuitwa pasina mvumo uye pasina kududzira kwainobva.
Tichachengeta ruzivo rwako chakavanzika. Kazhinji, isu tinongoshandisa ruzivo rwako mukati me RayHaberI enzanisa. Nekudaro, dzimwe nguva RayHaber.com inoshandisa wechitatu mapato kugadzirisa ruzivo rwako. RayHaber, RayHaber.com inoda kuti varege kushandisa ruzivo rwako pachako kunze kwekunge vaine yavo bhizinesi. Paunobatana RayHaber.com dzimwe nguva tinogamuchira ruzivo nezvako nezvewe. Semuenzaniso, kana iwe ukanyorera kwatiri kana kusaina kune tsamba yenhau, unogona kutiudza kuti iwe ndiwe ani, isu tingaonana sei newe uye zvaunofunga. Paunoshandisa RayHaber.com online services, tinoshandisa makuki uye tinotora IP kero. Unogona kuwana zvimwe pamusoro peizvi mune RayHaber.com